အလွန်အရေးကြီးလို့ ကမ္ဘောဇဘဏ်က တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေငြာလိုက်သော သတိပေးစာ – XB Media Myanmar
အားလုံးစိုးရိမ်​ခဲ့တဲ့အရာ​ရောက်​လာပါပြီ။ မြန်မာနိုင်​ငံရှိဘဏ်​အသုံးပြုသူ​တွေရဲ့ အ​ကောင့်​​တွေဟာ Crackerနဲ့ Hacker​တွေရဲ့. ပစ်​မှတ်​ဖြစ်​လာပါပြီ မကြာမီရက်​ပိုင်း နှင့်​လပိုင်း​လောက်​က မြန်​မာနိုင်​ငံ ဘဏ်​တစ်​ချို့ရှိ ဘဏ်​အသုံးပြု သူအ​ကောင့်​များကို ဟက်​ကာများမှ Phishing နှင့်​ တစ်​ခြား​သော နည်းလမ်း​ပေါင်းစုံနဲ့တိုက်​ခိုက်​လာကြပြီး ဘဏ်​ထဲမှ ​ငွေ​ကြေးများထုတ်​ယူမှုများဖြစ်​​ပေါ်​နေပါတယ်​။
တိုက်​ခိုက်​သူဟာ ဘဏ်​အသုံးပြုသူများဆီသို့ message facebook Mail Viber Whatsappစသည်​တို့မှတစ်​ဆင့်ု​​linkအတုများကို ဘဏ်​​ခေါင်းစဉ်​များတပ်​ပြီး​ပေးပို့ပါတယ်​ ဘဏ်​အ​ကောင့်​သုံးစွဲသူမှ ဘဏ်​မှပို့သည်​ထင်​မှတ်​ပြီး မိမိရဲ့ passwordနဲ့ဝင်​​ရောက်​လိုက်​တဲ့အခါ ဟက်​ကာ မှမိမိရဲ့ passwordကိုသိရှိသွားခြင်းဖြစ်​ပါတယ်​။
ဒီတိုက်​ခိုက်​မှုကို ကာကွယ်​ရန်​ မိမိစီသို့​ပေးပို့လာ​သော linkများအား စစ်​​ဆေးခြင်းမပြုပဲ ဝင်​ရန်​ မ​သေချာပါက မိမိ​ငွေအပ်​နှံထား​သောဘဏ်​အား ဖုန်းဆက်​အတည်​ပြု​ပေးရန်​ မိမိအားlink​ပေးပို့​သော အ​ကောင့်​ သို့မဟုတ်​ ဖုန်းနံပါတ်​များအား မှတ်​ထားရန်​ မိမိလက်​ကျန်​​ငွေကို စစ်​​ဆေး​ပေး​နေရန်​တို့ပဲ ဖြစ်​ပါတယ်​။
တိုက်​ခိုက်​သူသည်​ ဘဏ်​ကိုအဓိကထားတိုက်​ခိုက်​တာမဟုတ်​ပဲ အသုံးပြုသူကိုသာ ပစ်​မှတ်​ထားတိုက်​ခိုက်​တာဖြစ်​လို့ အကယ်​၍တိုက်​ခိုက်​ခံရသူသည်​ ဘဏ်​အ​ကောင့်​ထဲရှိ​ငွေများ ခိုးယူခံရပါက တိုက်​ခိုက်​ခံရသူနှင့်​သာဆိုင်​ပြီးဘဏ်​များနှင့်​ မဆိုင်​သဖြင့်​ ဆုံးရှုံး​ငွေများပြန်​ရဖို့ အခွင့်​​ရေးနည်းပါးလှပါတယ်​။
ယခုကဲ့သို့တိုက်​ခိုက်​ခံရမှုဟာ တခြားဘဏ်​​တွေမှာ ဖြစ်​​ပေါ်​နေတယ်​လို့ လွန်​ခဲ့​သော လပိုင်းထဲက့ ​ဖော်​ပြ ​ပေးခဲ့​ပေမဲ့ ယုံကြည်​တဲ့သူ နည်းပါးခဲ့ပါတယ်​။ ဒါ့ပြင်​တိုက်​ခိုက်​မှုများလည်းရှိလာငဖြင့်​ ကျွန်​​တော်​တို့ postကိုပြန်လည်​ရုတ်​သိမ်းခဲ့ပါတယ်​။
ယ​နေ့​တော့ က​မ္ဘောဇဘဏ်​မှ ယခုတိုက်​ခိုက်​မှုဟာ တကယ်​ဖြစ်​​နေ​ကြောင်း တရားဝင်​​ကြော်​ငြာခဲ့သဖြင့်​ ကျွန်​​တော်​တို့ ပြန်​လည်​​ဖော်​ပြခြင်းဖြစ်​ပါတယ်​။
KBZ ဘဏ်မှ ကြေညာထားချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
လေးစားရပါ​သော KBZ Online Banking အသုံးပြုများ
လတ်တလောအချိန်တွင် ကမ္ဘောဇဘဏ်၏ Online Banking အသုံးပြုသူများထံသို့ ကမ္ဘောဇဘဏ်မှပေးပို့သော Email ပုံစံအသွင်ဆောင်၍ Email အဆုံးသတ်တွင် ကမ္ဘောဇဘဏ်၏ ရုံးချုပ်လိပ်စာကိုပင်ထည့်သွင်းရေးသားလျက် ထင်ယောင်ထင်မှားပြုကာ Customer ၏အကောင့်ကိုတခြားသူတစ်ဦးမှ နိုင်ငံရပ်ခြားတစ်နေရာမှနေ၍ ၀င်ရောက်အသုံးပြုနေပါသည်ဟု ဆိုသော လိမ်လည်ဖြားယောင်း မဟုတ်မှန်သော နှိုးဆော်ချက်များအား ပေးပို့လျက် customer များအားထိတ်လန့်စိုးရိမ်မှုများဖြစ်ပေါ်စေကာ Username နှင့် Password ကိုအသုံးပြု၍ Login ၀င်ရောက်စေပြီး မိမိတို့၏အကောင့်အား စစ်ဆေး အတည်ပြုပေးခိုင်းသည့် Phishing email များကို မသမာသူများမှ အဆက်မပြတ် ပေးပို့လျက်ရှိပါသည်။
KBZ ဘဏ်၏ domain လိပ်စာနှင့်ဝင်ရောက်လာသော မေးလ်မဟုတ်လျှင် လုံးဝမနှိပ်ပါနှင့်။
ကမ္ဘောဇဘဏ်မှ တရားဝင် ပေးပို့သော email မှာ (KBZ Bank ) ဖြစ်ပြီး “ ” နောက်တွင် kbzbank com ဆိုသော domain နှင့် အဆုံးသတ်ပါသည်။
အဆိုပါ အချက်များအား သတိမပြုမိပဲ ထိုကဲ့သို့သော email များကိုနှိပ်မိသွားခဲ့လျှင် အကောင့်ကို ချက်ချင်း ပိတ်နိုင်ရန် ဘဏ်သို့အချိန်မှီအကြောင်းကြားသင့်ပါသည်။
အသေးစိတ်သိရှိလိုသည်များအတွက် KBZ Bank Online Banking Call Center 01 370108 ၊ 01 370109 များသို့ နေ့စဉ် မနက် ၆ နာရီမှ ည ၁၀ နာရီအတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
အားလုံးစိုးရိမျခဲ့တဲ့အရာရောကျလာပါပွီ။ မွနျမာနိုငျငံရှိဘဏျအသုံးပွုသူတှရေဲ့ အကောငျ့တှဟော Crackerနဲ့ Hackerတှရေဲ့. ပဈမှတျဖွဈလာပါပွီ မကွာမီရကျပိုငျး နှငျ့လပိုငျးလောကျက မွနျမာနိုငျငံ ဘဏျတဈခြို့ရှိ ဘဏျအသုံးပွု သူအကောငျ့မြားကို ဟကျကာမြားမှ Phishing နှငျ့ တဈခွားသော နညျးလမျးပေါငျးစုံနဲ့တိုကျခိုကျလာကွပွီး ဘဏျထဲမှ ငှကွေေးမြားထုတျယူမှုမြားဖွဈပျေါနပေါတယျ။
တိုကျခိုကျသူဟာ ဘဏျအသုံးပွုသူမြားဆီသို့ message facebook Mail Viber Whatsappစသညျတို့မှတဈဆငျု့linkအတုမြားကို ဘဏျခေါငျးစဉျမြားတပျပွီးပေးပို့ပါတယျ ဘဏျအကောငျ့သုံးစှဲသူမှ ဘဏျမှပို့သညျထငျမှတျပွီး မိမိရဲ့ passwordနဲ့ဝငျရောကျလိုကျတဲ့အခါ ဟကျကာ မှမိမိရဲ့ passwordကိုသိရှိသှားခွငျးဖွဈပါတယျ။
ဒီတိုကျခိုကျမှုကို ကာကှယျရနျ မိမိစီသို့ပေးပို့လာသော linkမြားအား စဈဆေးခွငျးမပွုပဲ ဝငျရနျ မသခြောပါက မိမိငှအေပျနှံထားသောဘဏျအား ဖုနျးဆကျအတညျပွုပေးရနျ မိမိအားlinkပေးပို့သော အကောငျ့ သို့မဟုတျ ဖုနျးနံပါတျမြားအား မှတျထားရနျ မိမိလကျကနျြငှကေို စဈဆေးပေးနရေနျတို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။
ယခုကဲ့သို့တိုကျခိုကျခံရမှုဟာ တခွားဘဏျတှမှော ဖွဈပျေါနတေယျလို့ လှနျခဲ့သော လပိုငျးထဲက့ဖျောပွ ပေးခဲ့ပမေဲ့ ယုံကွညျတဲ့သူ နညျးပါးခဲ့ပါတယျ။ ဒါ့ပွငျတိုကျခိုကျမှုမြားလညျးရှိလာငဖွငျ့ ကြှနျတျောတို့ postကိုပွနျလညျရုတျသိမျးခဲ့ပါတယျ။
ယနတေ့ော့ ကမ်ဘောဇဘဏျမှ ယခုတိုကျခိုကျမှုဟာ တကယျဖွဈနကွေောငျး တရားဝငျကွျောငွာခဲ့သဖွငျ့ ကြှနျတျောတို့ ပွနျလညျဖျောပွခွငျးဖွဈပါတယျ။
လတျတလောအခြိနျတှငျ ကမ်ဘောဇဘဏျ၏ Online Banking အသုံးပွုသူမြားထံသို့ ကမ်ဘောဇဘဏျမှပေးပို့သော Email ပုံစံအသှငျဆောငျ၍ Email အဆုံးသတျတှငျ ကမ်ဘောဇဘဏျ၏ ရုံးခြုပျလိပျစာကိုပငျထညျ့သှငျးရေးသားလကျြ ထငျယောငျထငျမှားပွုကာ Customer ၏အကောငျ့ကိုတခွားသူတဈဦးမှ နိုငျငံရပျခွားတဈနရောမှနေ၍ ဝငျရောကျအသုံးပွုနပေါသညျဟု ဆိုသော လိမျလညျဖွားယောငျး မဟုတျမှနျသော နှိုးဆျောခကျြမြားအား ပေးပို့လကျြ customer မြားအားထိတျလနျ့စိုးရိမျမှုမြားဖွဈပျေါစကော Username နှငျ့ Password ကိုအသုံးပွု၍ Login ဝငျရောကျစပွေီး မိမိတို့၏အကောငျ့အား စဈဆေး အတညျပွုပေးခိုငျးသညျ့ Phishing email မြားကို မသမာသူမြားမှ အဆကျမပွတျ ပေးပို့လကျြရှိပါသညျ။
KBZ ဘဏျ၏ domain လိပျစာနှငျ့ဝငျရောကျလာသော မေးလျမဟုတျလြှငျ လုံးဝမနှိပျပါနှငျ့။
ကမ်ဘောဇဘဏျမှ တရားဝငျ ပေးပို့သော email မှာ (KBZ Bank ) ဖွဈပွီး “ ” နောကျတှငျ kbzbank com ဆိုသော domain နှငျ့ အဆုံးသတျပါသညျ။
အဆိုပါ အခကျြမြားအား သတိမပွုမိပဲ ထိုကဲ့သို့သော email မြားကိုနှိပျမိသှားခဲ့လြှငျ အကောငျ့ကို ခကျြခငျြး ပိတျနိုငျရနျ ဘဏျသို့အခြိနျမှီအကွောငျးကွားသငျ့ပါသညျ။
အသေးစိတျသိရှိလိုသညျမြားအတှကျ KBZ Bank Online Banking Call Center 01 370108 ၊ 01 370109 မြားသို့ နစေ့ဉျ မနကျ ၆ နာရီမှ ည ၁၀ နာရီအတှငျး ဆကျသှယျမေးမွနျးနိုငျပါသညျ။